पुरानै लयमा फर्कंदै नेपाल पुलिस क्लब, एक महिनामा जित्यो २ उपाधि - Nepali Goal
Home » राष्ट्रिय फुटबल » पुरानै लयमा फर्कंदै नेपाल पुलिस क्लब, एक महिनामा जित्यो २ उपाधि
Milan Shahi फ्रेवुअरी 4, 2018 राष्ट्रिय फुटबल Leaveacomment 409 Views
काठमाडौं– २०६० सालताका नेपाल पुलिस क्लबको साख लोभलाग्दो थियो। घरेलु फुटबलमा पुलिसलाई हराउन ठूलै कसरत गर्नु पथ्र्यो, अन्य क्लबले।
२००८ देखि २०११ सम्म तीन पल्ट नेपालको चर्चित रामजानकी कप (लिग) जितेको पुलिस ५२ वर्षपछि पुनः लयमा फर्किएको थियो। उसले २०६३ सालमा नयाँ संस्करणको सहिद स्मारक लिगको उपाधि पहिलो पल्ट मात्र जितेन, २०६७ र २०६८ मा पनि लिग उपाधि जित्दै ह्याट्रिक गर्यो।
अझ, २०६७ सालको लिगमा पुलिस सबै खेलमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको थियो। २०६३ मा लिग जितेपछि नेपालको तर्फबाट एएफसी प्रेसिडेन्ट कप खेल्ने सौभाग्य पाएको पुलिसले प्रतियोगिताको फाइनल पुगेर सनसनी मच्चाएको थियो। पुलिसको नाममा अहिले पनि प्रेसिडेन्ट कपको फाइनल पुग्ने एकमात्र नेपाली क्लबको इतिहास कायमै छ। उसको यो इतिहासलाई अहिलेसम्म अन्य क्लबले चुनौती दिन सकेका छैनन्।
पुलिसले घरेलु फुटबलमा प्रभूत्व जमाउँदा उसको क्लबका प्रशिक्षक थिए, विराटकृष्ण श्रेष्ठ। त्यतिबेला पुलिस टिममा रमेश बुढाथोकी, रितेश थापा, राकेश श्रेष्ठ, रविन श्रेष्ठ, अनन्त थापा, पर्वत पाण्डे, भरत खवास, जुमानु राई, भोला सिलवालजस्ता प्रतिभावान खेलाडीको बाहुल्य थियो। पुलिसले २०६८ मा लिग जितेसँगै कोही खेलाडीले संन्यास लिए, केही चोटले बाहिरिए।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको उप–निर्देशक नियुक्त भएपछि विराटकृष्णले पनि प्रशिक्षक पद छाडे। त्यसपछि पुलिस टिमको प्रदर्शन विस्तारै ओरालो लाग्दै गयो। पछिल्लो समय लिग तथा घरेलु प्रतियोगितामा पुलिसको उपस्थिती फिक्का बन्दै गइरहेको थियो।
२०६८ मा लिग जितेपछि पुलिस ५ वर्ष उपाधिविहिन बन्यो। अघिल्लो साल सताक्षी गोल्ड कप र विराट गोल्ड कपको उपाधि जितेपछि पुलिससँग फुटबल समर्थकले धेरै आशा राखेका थिए। तर, यो सालको सुरुवात राम्रो हुन नसकेपछि उसका समर्थकहरू निरास बन्दै गइरहेको बेला पुलिस क्लब फेरि जुर्मुर्याएको छ।
यसै महिना मात्र उसले २ वटा उपाधि जितिसकेको छ। माघको पहिलो साता पुलिस राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत २८ औं पुरुष राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको थियो। पुलिसले फाइनलमा चिरप्रतिद्वन्द्वी नेपाल आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको थियो। आर्मीले पुलिससँग हार्नुअघि सिजनमा चार उपाधि जितेको थियो।
शनिबार पोखरामा सम्पन्न आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि पनि पुलिसले नै जित्यो। पुलिसले फाइनलमा थ्रीस्टार क्लबलाई १–० गोलले पराजित गर्ने क्रममा एकै महिनाभित्र दुईवटा उपाधि जित्यो।
८ वर्षपछि आहारारा गोल्डकप जितेको पुलिसले पाँचौ पटक उपाधिमा कब्जा जमाएको हो। २०१० मा उपाधि जितेपछि पुलिस पोखरामा जितका लागि तडपिरहेको थियो। लामो समयपछि पुलिसको सान फर्काउन सफल भएका प्रशिक्षक अनन्त थापा भन्छन्, ‘राम्रो फुटबल खेलाउन योजना बनाएर आएको हुँ। योजना अनुरुप खेल्दा जित पक्कै हात लाग्छ।’
अहिले पुलिस टिममा युवाहरूको वाहुल्यता छ। कुनै सयम राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको पुलिसमा हाल दीनेश राजवंशी मात्र यस्ता खेलाडी हुन्, जो राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्छन्।
त्यसैले क्लबले यू–१९ टिमका रेजिन सुब्बा र प्रेजन तामाङलाई भित्र्याउने कसरत सुरु गरिसकेको छ। यू–१९ टिमका अर्का मिडफिल्डर अभिषेक रिजाल यसअघि नै पुलिसमा आवद्ध भइसकेका छन्।
‘पुलिस टिममा २५ वर्ष भन्दा कम उमेरका खेलाडी छन्,’ थापाले भने, ‘मेरो योजना युवा खेलाडीलाई राम्रो फुटबल खेल्न प्रेरणा दिने हो।’
थापा दुई वर्षअघि पनि पुलिसका प्रशिक्षक थिए। बीचमा एकवर्ष कुमार कटवालले पुलिसको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि थापा फेरि पुलिसको प्रशिक्षकमा फर्किए।
थापाको योजना छ, पुलिसलाई आफू खेल्दाको समयभन्दा माथि उठाउने। ‘लगातार २ उपाधिसँगै खेलाडीमा आत्मविश्वास बढेको छ। सबै खेलाडी प्रतिभावान छन्,’ उनले लिग भएको खण्डमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने बताउँदै भने, ‘भविष्यमा पुलिसका खेलाडी राम्रो संख्यामा राष्ट्रिय टिममा पर्नेछन्।’
(नेपाल लाईभका लागि सीताराम कोइरालाको न्युज)
लिन्क : http://nepallive.com/news-details/13788/2018-02-04
Tags आहा ! रारा गोल्डकप नेपाल पुलिस क्लब
Previous मनाङलाई जित्दै संकटा बुढासुब्बा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
Next रोहितको टोली पर्सिजा जकार्ता इण्डोनेसियन प्रेसिडेन्ट कपको सेमिफाइनलमा